Isitolo esidayisa yonke impahla Home Decoration Yemvelo okunephunga elimnandi soy Wax Cube Melts tarts ifektri abakhiqizi | UWinby
Ukuhlobisa Kwasekhaya Amakha we-soy Wax Cube Melts tarts
● Enziwe nge-soya engokwemvelo yonke, lawa mathisi we-wax tarts ahlinzeka ngokusha okuhlanzekile futhi asebenziseka kalula. I-Wax melts iyindlela ephephe kakhulu kumakhandlela endabuko, ngakho-ke ungajabulela iphunga lawo.
● Lezi zingqimba ze-wax ezicibilikile zizogcwalisa ikamelo lakho ngephunga elimnandi. Ilungele amakamelo okulala, amakamelo okuhlala, izindlu zangasese, amahhovisi, nanoma ikuphi lapho ufuna ukuvuselela khona umoya.
● samukela ukwenza ngokwezifiso, ungasithumela umklamo wakho noma amalebula akho wangasese, i-wen ingakwenza ukuthi usampule kuqala futhi unelise izidingo zakho.
Usayizi: 7.5cm (Ubude) * 5.5cm (Ububanzi) * 2.3cm (Ukuphakama)
Ikhiyubhu le-wax elinemvelo liyancibilika
I-melt wax block ayinayo intambo futhi ingasetshenziswa nge-heater.
Lokhu kuncibilika kwe-wax kuphephile futhi kune-eco-friendly, lawa ma-cubes we-wax ancibilika athelwa ngesandla nge-soy wax ukuze kube nokusha okuhlanzekile.
I-wax wax iyancibilika yenziwa ngokusebenzisa yonke i-wax yemvelo yesoyela kanye namafutha wekhwalithi ephezulu kakhulu. Ama-Melts alungele izindawo zokulala, amahhovisi noma amafulethi.
Ukuhlukana noma i-clamshell wax melts kuyathandwa ngoba akubizi futhi kulula.
Ukuncibilika kuvame ukwenziwa egumbini eli-6, isikhunta se-clamshell sepulasitiki.
Ikyubhu ngayinye icishe ibe yi-1/2 oz. futhi izohlinzeka okungenani ngamahora ayisishiyagalombili.
Ungakhetha iphunga noma iphunga kuhlu lwethu lwamakha, njenge-lavender, i-vanilla, i-rose, isitrobheli, ulamula, ulwandle, njll.
Izinto I-soya yemvelo yemvelo
Usayizi 7.5cm (Ubude) * 5.5cm (Ububanzi) * 2.3cm (Ukuphakama)
Ilogo/ ilebula Ngokwezifiso njengezidingo zamakhasimende
Ingcina isisindo 70g
Isikhathi sokushisa 14hours
Langaphambilini I-chakra yokuhlobisa enamakha amakhandlela e-soy anama-crystals esitokisini
Olandelayo: Ukotini Candle Wick ne-Paraffin Wax Camera
Ukotini Candle Wick ne-Paraffin Wax Camera
Ukuma kwensika ikhandlela lephunga le-soya yemvelo
Ikhandlela lengilazi lesiliva elenzelwe ugesi elinovalo lwensimbi
okusobala ingilazi imbiza ikhandlela elimnandi